Akụkọ - 0.8mm - 5mm nkume dị nro, ihe ndozi ụlọ ọhụrụ na-ewu ewu mabụ ihe.
0.8mm - 5mm nkume dị nro, ihe ndozi ụlọ ọhụrụ na-ewu ewu
Akụkọ - 0.8mm - 5mm nkume dị nro, ihe ndozi ụlọ ọhụrụ na-ewu ewu mabụ ihe.
Mabụl eke dị oke mkpa
Na mmeghe nke Apple flagship ụlọ ahịa na Macau rụzigharịrị na-ewu ewu.Ndị mmadụ nwere nghọta dị icheIbé akwụkwọ mabụl dị ezigbo mkpa.
Taa, mmepụta nkeultra mkpamarble veneer, Ọ ọzọndị ọzọ na-aghọta na iche iche ohere nkemabulnkume.
Obere nkume mabụl dị oberepeeled si eke nkume n'ígwé.Na-ejigide ọdịdị okike na ọdịdị nke nkume ahụ kpamkpam.Ọ bụla udidi pụrụ iche , Ọ bụghị iṅomi nkume ngwaahịa film ebipụta ngwaahịa udidi.
Ugbu a, n'oge na-adịbeghị anya Guangzhou Design Week na nke a kwa afọ oriri na-eweta ọnụ ọhụrụ na ọnọdụ, ndị kasị na imewe nnukwu kọfị na-apụghị ịgụta ọnụ ngwaahịa na ihe 0.8mm --- 5mm The ultra thin marble nkume meghere ọhụrụ oge nke marble.
Mabul dị mkpankume agbahapụ omenala cognition nke marble si nkọwa nke "ìhè" ka "mkpa".Nye marble ume dị iche iche na ịma mma.Hapụ cognition omenala nke marble site na nkọwa nke "ìhè" na "mkpa".Nye marble ume dị iche iche na ịma mma
Sodalite blue marble maka ịchọ mma steepụ
Mabụl dị gịrịgịrịna-ejikọta ihe dị iche iche na usoro ọhụrụ dị iche iche.Na-ejigide udidi mara mma na okomoko nke marble ọdịnala.Echiche imewe pụrụ iche agbakwunyere n'ime ihe ọ bụla eji eme ihe.
Panda ọcha mabụl dị oke mkpa mabul
Enweghị ike iji mado mabul omenalaakụkụ gbara okirikiri.Ọ na-abụkarị nsogbu maka ndị na-emepụta ihe.Nkeultra-mkpa mabulna-agbaji site na njirimara anụ ahụ nke nkume ma na-eme ka mgbanwe nke nkume ahụ dịkwuo elu.Ogo kachasị elu nwere ike iru ogo 360, nke nwere ike ịghọta nhazi ụdị pụrụ iche dị ka elu agbagọ, elu arc, elu S-shaped, wdg.
Nkeultra-mkpa mabulIhe mejupụtara enyo enyo ma ọ bụ mkpụrụ rọba na-eme ka nnyefe ọkụ dị n'elu nkume dum.Enwere ike ịgbanwe isi iyi ọkụ agba arụnyere iji mepụta ma ọ bụ gbanwee ike nrọ maka oghere na ọchịchọ
Na-esote, ka anyị na-ahụ imewe nke ultra-mkpa nkume ọnụ!Ngwa nkeultra-mkpa mabul: mkpuchi ekwentị mkpanaaka, arịa ụlọ dị elu, eserese ala na-ebufe ọkụ, oriọna oriọna, wdg.
Ọdịdị mara mma nke mabụl dị nro
Oge nzipu: Mee-25-2022
Black Granite, Gray Gray dị ọkụ, Taịlị mgbidi Marble ọcha, Gray Granite, Granite odo odo, Ihe nrịbama granite na-acha anụnụ anụnụ,